Gaadiidleyda Muqdisho iyo Afgooye oo shaqo joojin ku dhaqaaqay – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAGaadiidleyda Muqdisho iyo Afgooye oo shaqo joojin ku dhaqaaqay
Gaadiidleyda Muqdisho iyo Afgooye oo shaqo joojin ku dhaqaaqay
December 10, 2017 Cabdi nuur WARARKA MAANTA 0
Waxaa saaka hakad ku jira Waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye iyada oo Wadayaasha Gaadiidka dadweynaha ee waddadaas ka shaqeeyana ay ku dhawaaqeen shaqo joojin.
Wadayaasha ayaa sababta ku sheegaya in waddada Xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye la soo dhigay jidgooyooyin kale oo lacago badan looga qaado Gaadiidka adeegsada waddadaas.
Gaadiidleyda ayaa sidoo kale dhigaya dibadbax iyaga oo ka cabanaya dhibaatada ay kala kulmaan Waddada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye.
Boqolaal qof ayaa maalin waliba isaga kala goosha Waddadan oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee Muqdisho ka baxa waxaana ay aaddaa Gobolka Shabeellaha hoose,halkaas oo Khudaarta iyo xoolahaba ay ka soo galaan Magaalada Muqdisho.
Jidgooyooyinka cusun ayaa la dhigay degaanka Lafoole oo ka tirsan Gobolka Shabeellaha hoose,halkaas oo uu ka arrimyo maamyul hoostaga Koofur Galbeed Soomaaliya.
Wadayaasha gaadiidka oo soo dhigtay Baabuurtooda meelo kala duwan, ayaa wadada laamiga ah waxa ay ka dhigayaan Banaanbax cabasho ah oo ku aadan jidgooyooyinka cusub ee wadada la soo dhigay.
WAR DEG DEG: Weerar ka dhacay Gobolka Baay oo lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab
53,004 total views, 891 views today
53,004 total views, 891 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
53,074 total views, 891 views today
53,074 total views, 891 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
53,085 total views, 891 views today
53,085 total views, 891 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
53,107 total views, 892 views today
53,107 total views, 892 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
53,145 total views, 892 views today
53,145 total views, 892 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]